Author: Zolor Yozshushicage
Mooshinka kuma saabsana Imaaraatka oo kaliya, ee sidoo kale waxa uu xusayaa dowladdo kale oo la sheegay in ay iyaguna farogalin ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya, wuxuuna mooshinka ku baaqayaa in loola dhaqmo si la mid ah Imaaraatka.
Marar badan oo hore maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in xiriirka ay u jartay dowladda dhexe. Siyaasadda iyo Xukunka Soomaaliya. Guddiga Xorta ah ee Dastuurka Federaaliga ayaa go,aan ka gaari doona midka saddexdaas arimood la qaadanayo marka sidaa laga maqlo la tashiga dadweynaha. Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Waxaa loo qaateen ah in macnaha laga wado Djibouti iyo gobolada looga soomaaluya af Soomaaliga ee wadamada jaarka ah. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah kuwa mooshinka gudbiyay ayaa sheegay: Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana dasyuurka hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu yiri xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay. Xarun magaceedyada Bog Wadahadal.
Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan. Xaaf markii uu garoonka Cadaado kasoo dagayay waxaa loosoo dhaweeyay si aanan horay loo soimaaliya, waxaana hareertiisa ka muuqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Galmudug oo ahaa ninkii shir guddoomiyay kullankii baarlamaanka ee xilka looga qaaday madaxweynihii hore Cabdikariim Xuseen Guuleed.
Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Soomaaliya Malahan manhaj mideeysan ee wax barasho, waxaa ka jira Dugsiyo iyo jaamacado si gaar ah loo leeyahay.
Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya
Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga. Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Dasguurka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay faragalin qaawan ku hayso maamulka Galmudug, wuxuuna yiri “Waxaan reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha caalamka iyo UN-ka ogeysiinayaa arrinta faragelinta ah ee dowladda federaalka nagu hayso in ay tahay dhabar jab reer Galmudug ka dhan ah”.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Madaxweynihii dhawaanta xilka laga qaaday ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo wali ku adkaysanaya in uu yahay madaxweyne ayaa hoggaanka dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka dambeeyeen in isaga xilka laga qaado.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Imaaraadka oo rajo xumo ka muujiyay xal u helidda khilaafka Khaliijka.
Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Nidaamka Federaaliga iyo Qaranimada Soomaaliya 7 Sebtembar Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray Khilaafka Khaliijka. Qoraalka gudaha oo kooban.
Dastuurka Soomaaliya – Wikiwand
Khilaafka Khaliijka iyo siduu u kala qaybiyay Soomaaliya. Fikradani waxay kaga timid dastuurka markii ugu horeysay Xeerkii Kumeel Gaarka ahaa ee la qoray sanadkii Dawladda Federaalka Soomaaliya Af-Carabi: Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu ka mid yahay labada hogaamiye ee aan ka hadlin moowqifkooda ku aadan khilaafka Khaliijka iyo go’aanka dhowladda dhexe.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso. Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan soomaaliya uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta.
Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga. Murankaas oo markii dambe xal laga gaaray.